Padaethar - Page 219 of 228 -
၂၀၂၀ အတွက် နောက်ဆုံးအကြိမ် စူပါမွန်းဖြစ်မည့် ကဆုန်လပြည့်နေ့ . . .
စူပါမွန်းဖြစ်မည့် ကဆုန်လပြည့်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ (၆) ရက်နေ့ညမှာတော့ လမင်းကြီးဟာ နေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်တည့်တည့်ကို ကျရောက်မှာဖြစ်ပြီး၊ မှောင်နေတဲ့ ည ကမ္ဘာခြမ်းမှာ နေရဲ့အလင်းရောင် တိုက်ရိုက်ကျရောက်နေတဲ့ လမင်းကြီးကို ထွန်းလင်းတောက်ပစွာနဲ့ တစ်ညလုံး တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကတော့ ကဆုန်လပြည့်နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများမှာ ကဆုန်ကို “ကုဆုန်” “ခုဆုန်” စသည်ဖြင့် ရေးသားကြတယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။ “ကု””ခု” ဆိုတာ “ရေ” ကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ” ဆုန်” ဆိုတာကတော့.. စီးဆင်းခြင်း၊ သွန်းလောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကဆုန် ဆိုတာ ရေသွန်းလောင်းခြင်း လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ မထွန်းကားစဉ်အခါက အခုလို ပူပြင်းတဲ့ နွေကာလမှာ သစ်ပင်ကြီးငယ်များကို ရေသွန်းလောင်းခဲ့ကြပြီး..၊ ရှင်အရဟံရောက်ရှိလို့ ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားပြန့်ပွားလာတဲ့အခါမှာတော့.. … Read more
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီနော်..
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ပါ သံပုယိုသီ3းလုံး, ကြက်သွန်ဖြူအတက်ကြီး5တက်, ဂျင်းအနေတော်အတက် တစ်တက်!! ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတ်ထိုး, ကြက်သွန်ဖြူ5တက်အခွံခွါ, ဂျင်းကိုအခွံခွါ ပါးပါးလှီး!! ရေ2လီတာ ပွက်ပွက်ဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတွေထည့်ပီး နာရီဝက်ပြုတ်!! ပြီးရင်အဖတ်တွေဆယ်ပီးပစ်လိုက်ပါ!! အရည်ကိုအအေးခံပီး အစာမစားခင်နာရီဝက်အလိုမှာ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာသောက်ပေးပါ!! တစ်နေ့3ကြိမ်ပေါ့!! တစ်ပတ်ကြာရင် ဗိုက်ပြုတ်သွားပါတယ်တဲ့ ကျမလဲအခုမှလုပ်ကြည့်တာပါ ချစ်တို့လဲ လုပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင် Thida Myint Unicode ဗိုကျပွုတျဆေးနညျးလေး တငျပေးဆိုလို့ပါ သံပုယိုသီ3းလုံး, ကွကျသှနျဖွူအတကျကွီး5တကျ, ဂငျြးအနတေျောအတကျ တဈတကျ!! ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတျထိုး, ကွကျသှနျဖွူ5တကျအခှံခှါ, ဂငျြးကိုအခှံခှါ ပါးပါးလှီး!! ရေ2လီတာ ပှကျပှကျဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတှထေညျ့ပီး နာရီဝကျပွုတျ!! ပွီးရငျအဖတျတှဆေယျပီးပဈလိုကျပါ!! အရညျကိုအအေးခံပီး အစာမစားခငျနာရီဝကျအလိုမှာ ဖနျခှကျတဈခှကျစာသောကျပေးပါ!! တဈနေ့3ကွိမျပေါ့!! တဈပတျကွာရငျ ဗိုကျပွုတျသှားပါတယျတဲ့ … Read more
ရုရှား မှာ ၂၄ နာရီ အတှငျး လူ တဈသောငျးကြျော ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရပွီး ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျ
ရုရှား မှာ ၂၄ နာရီ အတှငျး လူ တဈသောငျးကြျော ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရပွီး ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျ ရုရှားနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ စတငျ ကူးစကျဖွဈပှားခြိနျကစပွီး အမွငျ့မားဆုံး စံခြိနျတငျနှုနျးထား အဖွဈ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတှငျး ဗိုငျးရပျဈကူးစကျသူပေါငျး ၁၀၆၃၃ ဦး ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာဆိုရငျ တဈကမ်ဘာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗျိုငးရပျဈ တဈရကျတညျးမှာ ကူးစကျခံရမှု အမြားဆုံး နှုနျးထားလညျး ဖွဈပါတယျ။ အခု ကူးစကျနှုနျးကွောငျ့ နိုငျငံအတှငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ စုစုပေါငျး ကူးစကျခံရ သူဦးရဟော ၁၃၄၆၈၆ ဦး ရှိသှားပွီး ကမ်ဘာမှာ ခုနဈနိုငျငံမွောကျ အမြားဆုံး ကူးစကျ ခံရတဲ့ နိုငျငံဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမရေိကနျ၊ အီတလီနဲ့ စပိနျလို အခွားနိုငျငံတှေ နဲ့ … Read more
← Previous Page1 … Page218 Page219 Page220 … Page228 Next →